Kenya oo la halgameysa dhillooyin Shiinays ah: 15 ayaa laga qabtay dhillooyinka; Shiinaha waxaa lagu yaqaan inay yihiin shaqaale aan daalin, haa, waxay ku sugan yihiin dhammaan meelaha oo ay ku jiraan dhillaysiga; Runtii, muwaadiniinta Shiinaha sidoo kale waa kuwo aad ufiican, shaki la'aan shaki galinta maalgashiga dhilleysiga maaddaama ay sifiican ugu caddeeyeen Kenya, dalkan Bariga Afrika ... (VIDEO)
Kenya oo la halgameysa dhillooyin Shiinays ah: 15 ayaa laga qabtay dhillooyinka; Shiinaha waxaa lagu yaqaan inay yihiin shaqaale aan daalin, haa, waxay ku sugan yihiin dhammaan meelaha oo ay ku jiraan dhillaysiga; Runtii, Muwaadiniinta Shiinaha sidoo kale waa kuwo aad u fiican, shaki la'aan inay maalgashadaan dhilleysiga maadaama ay sifiican ugu caddeeyeen Kenya, waddankan Bariga Afrika ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 13, 2020 12: 18 No Comments
Haddii Shiinuhu ay joogaan meel walba iyo dhammaan aagagga, waxay sidoo kale ku fiican yihiin inay been abuuraan wax kasta oo ay doonayaan inay wax kasta ku baabi'iyaan kuwa kale. Ma isla aragtidan ayay ka shaqeeyaan dhillaysiga Afrika si ay u burburiyaan Qaaraddan? Shaki la'aan waa waxa la arko sida haweenka Shiinaha ay uga xadaan bandhiga dumarka Afrikaanka ah guryaha dhillooyinka iyo guryaha kale ee galmada ee Afrika. Ragga Shiinaha waxay noqdeen milkiileyaal dhillo waaweyn.
Iyagoo wajahaya xaaladan jirta, ayay dowladda Kenya waxay bilowday dagaal ka dhan ah muwaadiniinta Shiinaha ee ku howlan ganacsiyo gaar u leh dadka deegaanka. Howlgalkii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay mid ka mid ah dhillayaasha ku yaal magaalada caasimada ah ee Nairobi halkaas oo lagu qabtay 15 qof oo u dhashay Shiinaha. Xariggan waxaa suuragaliyay saraakiisha socdaalka ee aagga caanka ah ee guryaha South C. Eedeysanayaasha Shiinaha ayaa isla markiiba loo daabulay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta si loogu daaweeyo ka dibna loo tarxiilo ”, ayaa lagu yiri warbixinta Daily Qaran.
Waa sababta oo ah Shiinuhu waxay rabaan inay ku guuleystaan ​​wax walba, meel kasta, wax kasta iyo wax kasta oo aysan dooneynin xirfadda ugu da'da weyn adduunka inay ka baxsadaan. Iyaga oo maalgelinaya dhillaysiga Afrika, waxay sidoo kale doonayaan inay ku baabi'iyaan Afrika iyada oo loo marayo xirfaddan gaarka ah iyadoo isla markaa laga xayuubinayo xirfadleyda Afrikaanka ah inay ku guuleystaan ​​arimahan. Tani waa heerka ay ku yaalliin meeriska Shiinaha.
Sidee baa jeermis badan iyo gariir badan looga tallaalaa 'Covid-19'? Saynisku wuu ogyahay sida looga cabiri karo virus-ka Corona ka hortagga soo noqnoqoshada iyo gariirka
Sep27 10: 24
Horyaalka Premier League ayaa si toos ah oo dhameystiran u socda KL / Sport (xilli ciyaareedkii 2020/2021): Ha moogaanin kulanka Man City vs Leicester City toos… (LIVE)
Sebtember 27, 2020 11: 25